Etu esi eweghachi faili emelitere ma ọ bụ nke ọhụrụ Robots.txt | Martech Zone
Etu ị ga-esi nyefe faịlụ Robots.txt emelitere ma ọ bụ nke ọhụụ
Friday, April 29, 2016 Tọzdee, Eprel 28, 2016 Douglas Karr
Agencylọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ nyocha ọchụchọ maka ọtụtụ ndị na-ere SaaS na ụlọ ọrụ ahụ. Onye ahịa nke anyị malitere ịrụ ọrụ na nso nso a emeela omume ziri ezi, na-etinye ngwa ha na subdomain ma na-ebugharị saịtị broshuọ ha na isi ngalaba. Nke a bụ ụkpụrụ omume ebe ọ na-enyere ma ndị ọrụ gị ma ndị ahịa gị aka ime mmelite ka achọrọ ha na enweghị nkwado ọ bụla na nke ọzọ.
Dị ka nzọụkwụ mbụ na nyochaa nyocha ahụike ha, anyị debara aha broshuọ na ngalaba ntinye akwụkwọ na Webmasters. Ọ bụ mgbe ahụ ka anyị matara otu nsogbu dị ozugbo. A na-egbochi peeji nke ngwa ahụ ka edepụtara ya site na engines ọchụchọ. Anyị na-agagharị na ntinye ha robots.txt na Webmasters ma mata ozugbo nsogbu ahụ.
Mgbe ha na-akwado maka Mbugharị, otu ndị otu mmepe ha achọghị ka e depụta subdomain ngwa ahụ site na ọchụchọ, yabụ ha ekweghị ka ịnweta ngwa ọchụchọ. Robot.txt faịlụ bụ faịlụ achọtara na mgbọrọgwụ nke saịtị gị - yourdomain.com/robots.txt - nke na - eme ka igwe nyocha ahụ mara ma ha ga - ari saịtị ahụ ma ọ bụ na ha ekwesịghị. Nwere ike ide iwu iji nye ma ọ bụ kwenye ederede na saịtị niile ma ọ bụ ụzọ akọwapụtara. I nwekwara ike ịgbakwunye otu ahịrị ezipụta gị sitemap faịlụ.
The Robots.txt faịlụ ahụ nwere ntinye na-esote nke gbochiri saịtị ahụ ka ọnụọgụ wee depụta ya na nsonaazụ nsonaazụ ọchụchọ:
Nye ọrụ-gị n'ụlọnga: * Disallow: /
Ọ kwesịrị e dere dị ka ndị a:
Onye ọrụ-nnọchite: * Kwe ka: /
Nke ikpeazụ na-enye ikikere ọ bụla nyocha igwe na-akpụgharị na saịtị ahụ na ha nwere ike ịnweta ndekọ ọ bụla ma ọ bụ faịlụ ọ bụla n'ime saịtị ahụ.
Akwa… ya mere ugbu a na robots.txt faịlụ ahụ zuru oke mana olee otu Google si mara na olee mgbe ha ga-elele saịtị ahụ ọzọ? Ọfọn, ị nwere ike ịrịọ ka Google lelee gị robots.txt, mana ọ bụghị nghọta.
Na-agagharị na Google Search njikwa njikwa Google Search Console na Crawl> robots.txt Onye nyocha. Ga-ahụ ihe ndị dị na faịlụ robots.txt na-adịbeghị anya n'ime Tester. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnyefe faịlụ robots.txt gị, pịa Nyefee na popup ga-abịa na nhọrọ ole na ole.
Nhọrọ ikpeazụ bụ Gwa Google ka o melite. Pịa bọtịnụ na-acha anụnụ anụnụ nyefere nhọrọ na nhọrọ ahụ wee laghachi na Crawl> robots.txt Onye nyocha menu nhọrọ iji bubatagharịa ibe ahụ. Ga-ahụzi faịlụ robots.txt emelitere yana stampụ ụbọchị na-egosi na ọ ghagharịrị ọzọ.
Ọ bụrụ n’ị hụghị ụdị emelitere, ị nwere ike pịa nyefere ma họrọ Lelee ụdị ebugo ịnyagharịa faịlụ robots.txt gị n'ezie. Ọtụtụ sistemụ ga-echekwa faịlụ a. N'ezie, IIS na - ewepụta faịlụ a nke ọma dabere na iwu abanye site na njirimara onye ọrụ ha. O yikarịrị ka ị ga-emelite iwu ahụ ma mee ka oghere ahụ dị ọhụrụ iji bipụta faịlụ ọhụrụ robots.txt.
Tags: google webmastersrobotsrobots.txtfaịlụ robots.txtAwebmasters
Globaldị usoro mmemme nke ụwa 2016 na amụma